Sabrina အပိုင်း ၄ ၏ Chilling Adventures အပိုင်း ၄ ရက်ဖြန့်ချိသည့်ရက်၊ သွန်းခြင်း၊ နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အခြားအရာများ - Netflix သတင်း
Sabrina အပိုင်း ၄ ၏ Chilling Adventures အပိုင်း ၄ ရက်ဖြန့်ချိသည့်ရက်၊ သွန်းခြင်း၊ နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အခြားအရာများ
လေးသမားရာသီ6Netflix လွှတ်ပေးရန်
Sabrina ၏အေးအေးဆေးဆေး (L မှ R ကို) KIERNAN SHIPKA ၏အေးဂျင့်များ SABRINA ၏အေးမြသော ADVENTURES ၏ဇာတ်လမ်းတွဲ 213 အတွက်။ NETFLIX ၏တရားမျှတမှု© 2020
Great British မုန့်ဖုတ်ပွဲ - အားလပ်ရက်ရာသီ ၃ သည် Netflix သို့ယနေ့ညသို့လာမည် Alien Worlds ရာသီ ၂ ရက်ဖြန့်ချိမည့်ရက်၊ သွန်းခြင်း၊ အနှစ်ချုပ်၊ နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အခြားအရာများ
Sabrina အပိုင်း ၄ ၏ Chilling Adventures အပိုင်း ၄ ကိုထုတ်လွှင့်သည့်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာသိထားမည်နည်း
ကျနော်တို့ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် Sabrina ၏ Adventures ကိုအေး မကြာမီ Netflix အပေါ်အပိုင်း 4!
Sabrina ၏ Adventures ကိုအေး ဒီနှစ်ပိုပြီးဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူပြန်လာမယ့်နေသည်။
Sabrina ၏ Chilling Adventures ကို Netflix တွင်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ စီးရီးအပိုင်း4ပြီးနောက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
အောက်မှာငါတို့ဝေမျှခဲ့တယ် Sabrina ၏ Adventures ကိုအေး အပိုင်း4ဖြန့်ချိသည့်နေ့စွဲ, သွန်း, နောက်တွဲယာဉ်, အနှစ်ချုပ်နှင့်ပိုပြီး!
Sabrina Part4၏ Chilling Adventures အပိုင်း ၄ ဖြန့်ချိသည့်နေ့
Sabrina ၏ Adventures ကိုအေး အပိုင်း4သငျသညျနှစ်သစ်ကူးonဝရက်တွင်အပြည့်အဝရာသီကိုကြည့်နိုင်သည်ဒီဇင်ဘာလ 31, 2020 ရက်တွင် Netflix ကမှလာမယ့်နေသည်!
Sabrina အပိုင်း ၄ သရုပ်ဆောင်ခြင်း၏ Chilling Adventures
Netflix ၏သွန်းအတည်ပြုမထားပါဘူး Sabrina ၏ Adventures ကိုအေး အပိုင်း 4, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အပိုင်း3မှပြန်လာကြလိမ့်မည်သူတစ် ဦး အလွန်ကောင်းသောစိတ်ကူးရှိသည်။
Kiernan Shipka သည်အပိုင်း ၄ ကို Ross Lynch၊ Lucy Davis၊ Chance Perdomo၊ Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Richard Coyle, Miranda Otto, Lachlan Watson နှင့် Gavin Leatherwood တို့နှင့်အတူပြန်လည်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။
ဘယ်အချိန်မှာ Ozark ရာသီ3Premiere ပါဘူး
Jonathan Whitesell, Luke Cook, Sam Corlett နှင့် Skye Marshall တို့သည်လည်းဇာတ်လမ်းအသစ်များအတွက်ပြန်လာကြလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့ဖြစ်ကောင်းအပိုင်း4အတွက်ဇာတ်ကောင်အသစ်များနှင့်လည်းတွေ့ဆုံရန်တာပေါ့။ ကျနော်တို့ယခုအချိန်အထိတစ် ဦး ချင်းစီအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်ဇာတ်ကောင်အသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိချိန်တွင်အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများကိုသင့်၏သရုပ်သကန်ကို update လုပ်ရန်သေချာပါသည်။
Sabrina အပိုင်း ၄ နောက်တွဲယာဉ်၏စွန့်စားခန်း
Netflix ကပဲနောက်တွဲယာဉ်ကိုမျှဝေလိုက်သည် Sabrina ၏ Adventures ကိုအေး အပိုင်း ၄!
Sabrina အပိုင်း ၄ အနှစ်ချုပ်၏အေးမြသောအပန်းဖြေမှု
Netflix သည်အပိုင်း (၄) အတွက်အနှစ်ချုပ်ကိုမျှဝေခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျနော်တို့အပိုင်း4များအတွက်နောက်တွဲယာဉ်ကိုမြင်သောအချိန်တစ်ဝိုက်ကြောင်းကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထား။
သို့သော်ရာသီစတင်မည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ရှိနေသေးသည်။ Sabrina သည်အခြားအချိန်ဗားရှင်းအားငရဲတွင်အုပ်စိုးခြင်းဖြင့်အာကာသ - အချိန်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်စေသောအရာတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခြားကစားပွဲများ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့်ဇာတ်လမ်းများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့်အတိုင်း၎င်းသည်မည်သို့ထွက်ပေါ်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသော်လည်း၊ ဤနည်းဖြင့်အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီရှုပ်ထွေးမှုသည်ဘယ်သောအခါမျှကောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Mambo Marie အဆိုအရမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင်အလွန်ဆိုးသောအရာတစ်ခုခုလည်းရှိသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ အဲဒါဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့စုန်းမတွေ၊
ငါတို့သိသမျှအားလုံးပါပဲ Sabrina ၏ Adventures ကိုအေး အပိုင်း ၄! ထိုစီးရီးနှင့်ပတ်သက်။ နောက်ထပ်သတင်းများအဘို့အညှိနေပါ!
နောက်တစ်ခု:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀: ၂၀၂၀ နွေရာသီ
လူသတ်မှုရာသီမှအပိုင်း (၁၂) ကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း
Hulu အပေါ် Bates မိုတယ်ရာသီ 4
အချိန်အပျေါမှာ Netflix ထွက်ခွာတစ်ချိန်က